Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Gini mere ichere maka UNWTO General Assembly? Odeakwụkwọ ọhụrụ ọhụrụ etinyeworị ebe?
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Georgia • ndị mmadụ • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọ bụ ntuli aka kacha ekwu okwu na nke kacha asọ mpi site na kọmitii isi nke United Nations World Tourism Organisation (UNWTO). Ọtụtụ ndị isi ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya na gọọmentị mba ụwa egosila nnukwu obi abụọ ma ọ bụrụ na ọgbakọ ọgbakọ ọzọ nke UNWTO ga -akwado nkwenye nke ndị isi oche na nke ugbu a.
Nkwenye a dị mkpa maka onye nnochite anya mmeri Zurab Pololikashvili. Usoro a ga -eme n'oge ọgbakọ UNWTO zuru oke na Chengdu, China na Septemba 2017.
Ozugbo akwadoro okwu maka akụkọ UNWTO Secretary General ga -amalite Jenụwarị 1, 2018
Enwere ike iji oge site na Septemba ruo ngwụsị afọ mee ihe maka odeakwụkwọ ukwu ugbu a iji gosi odeakwụkwọ ukwu-ahọpụtara etu sistemụ si arụ ọrụ.
Dị ka ozi eTN natara si kwuo, usoro a amalitela n'isi ụtụtụ na tupu ekwenyekwa onye ahọpụtara ọhụrụ. Ọ na -eju ụfọdụ ndị nọ na nzukọ a anya ma na -echegbu onwe ha, ndị ọzọ na -ahụ na ọ bụ iwu maka onye isi ọhụụ enwere ike maka njem nlegharị anya isonye na nzukọ kacha elu.
Maazị Pololikasvili gara mkparịta ụka nchịkwa ọkwa abụọ dị elu na Madrid, nke na -abụkarị naanị maka odeakwụkwọ ukwu na ndị nọ ya nso na ndị isi.
"Onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO" bụ onye nnọchi anya aha Pololikashvili bipụtara n'onwe ya awards-tourism.com . A maara onyinye ndị a dị ka “Oscar” maka nnabata ndị njem nlegharị anya Georgia. National Tourism Awards na -eji nganga họpụta Zurab ka ọ bụrụ ọkaiwu.
Ihe nrite a na -enweta nkwado dị ukwuu site n'aka gọọmentị Georgia na ndị ụlọ ọrụ onwe. Nchịkwa njem nlegharị anya nke Georgia bụ onye na-ahazi ọrụ a, Ministry of Economics na Sustainable Development nke Georgia na Tbilisi City Hall bụ ndị na-akwado ọchịchị.
Ebumnuche nke ọrụ a bụ ịgba ndị njem na ụlọ ọrụ ọbịa ọbịa na Georgia ume ma kwalite mmata nke azụmaahịa na-eme njem nlegharị anya na ụdị nke na-eme ka obodo dị mma n'ụwa niile.
Ememe nturu ugo a bụ ohere ijikọ ndị ọchịchị obodo na nke ime obodo, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ndị na -ahụ maka njem, ụlọ ọrụ njem, ụlọ ọrụ mmanya na ihe ndị ọzọ.
N'ezie, ndị mmadụ na njem njem na njem nlegharị anya Georgia na -enwe obi ụtọ inwe onye sitere na obodo ha ka a họpụta ya maka ọrụ kacha elu na njem nlegharị anya. Ọ nwere ike ịkọwa na mmadụ nwere ike ileghara ọnọdụ ahụ anya.
Mmegharị ọzọ dị ịtụnanya bụ maka Pololikashvili izute Minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Bulgarian Angelkova ma kwurịtara okwu metụtara UNWTO ọ bụghị ihe ọ bụla dị mkpa maka nsogbu abụọ dị n'etiti Georgia na Bulgaria.
Otu akụkọ dị na mgbasa ozi Bulgaria kwuru, sị: "Minista na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Bulgarian Angelkova zutere odeakwụkwọ ukwu UNWTO Nominee Pololikashvili nwere nzukọ ọrụ na Belgrad na Mgbakọ maka njem nlegharị anya na mpaghara Danube."
"Ha abụọ tụlere ohere maka imekọ ihe ọnụ n'etiti Ministry of Tourism na UNWTO, yana atụmatụ njikọta ọdịnihu maka mmepe na -adigide nke ngalaba a. Angelkova maara Pololikashvili na usoro nke Bulgaria mere maka mmepe njem nlegharị anya wee mesie ya obi ike na obodo ahụ ga -aga n'ihu na -abụ otu n'ime ndị otu UNWTO kacha arụ ọrụ. "
Onye ozi Bulgaria gwara onye nta akụkọ na nnọkọ mkparịta ụka Bulgaria kwadoro votu Georgia. Bulgaria bụ onye otu UNWTO Executive Council.
Ọ nwere ike bụrụ ezigbo ọganiihu maka Zurab izute ndị mgbasa ozi wee zaa ajụjụ ụfọdụ gbasara nzukọ a na nsogbu ndị ọzọ. Nghọta a emebeghị.